Belarosia: Famoretan’ny Mpitandro Filaminana Ny Androm-Panoherana Tao Minsk · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2011 11:51 GMT
Ny famoriam-bahoaka am-pahatoniana tao Minsk, izay nokarakaraina tamin'ny alalan'ny Vkontakte, tambajotra sosialy Rosianina iray malaza ao Belarosia sy firenena Sovietika hafa teo aloha, dia niafara tamin'ny fisamborana olona maherin'ny 450. Ireo fisamborana, fampiakarana fitsarana sy fihazonana am-ponja faobe, na izany aza, dia toa tsy manakivy ireo mpanao fihetsiketsehana akory.
Ny andron'ny 22 Jona 2011 tamin'ny 7ora alina no nosafidiana hanaovana ny fihetsiketsehana (nankalazaina tamin'ny tenifototra #2206v1900 tao amin'ny Twitter ).
Fikambanana Vkontakte maro no nitsangana mba handrindràna ny hetsika atao; “Hetsika hoan'ny hoavy” [ru] no iray isan'ny tena nalaza, izay nanakaiky ny 214,000 no mpikambana.
Kanefa ny polisy, tsy vitan'ny hoe nanenjika fotsiny ireo mpandrindra ny vondrona, fa niantso [ru] ihany koa mpikambana tsotra toy ny mahazatra (ireo izay hitan-dry zareo) mba hifandinika ho fisorohana, ka nandritra izany no niezahan-dry zareo nanakiviana ny olona tsy handray anjara amin'ilay famoriam-bahoaka.
Ny fitondrana Belarosiana, ho fanampin'ny fampiasana herisetra, ny sivana, ary fiampangàna, dia nisafidy ny tsy hanao tsinontsinona ny Twitter ihany koa. Tany amin'ny Aprily 2011, ny Minisitry ny Atitany Belarosiana dia nanomboka [ru] nampiasa ireo kaonty @mvd_by [ru], ary ny Departemantan'ny Polisin'i Minskt (@GUVD_Minsk [ru]) no nanaraka.
Nandritra ny fihetsiketsehana, tena navitrika tamin'ny fandefasana bitsika ireo kaonty roa ireo, nanakivy iureo nikasa handray anjara amin'ny hetsika, nandresy lahatra [ru] fa ny hetsi-panovàna karakaraina amin'ny aterineto dia fandikàna tsotra izao ny lalàna Belarosiana. @GUVD_Minsk[ru] dia nitanisa (sady angamba nankalaza tena) mivantana ny valin'adiny:
Araka ny nambaran'ny Reuters, efa ho 1000 ny vahoaka voaangona tamin'ny famoriana tao Minsk tamin'ny 22 Jona. Ity lahatsary manaraka nalaina tao amin'ny Youtube ity dia nangonina tamin'ny lahatsoratra fitantaràna nataon'ilay mpanoratry ny GV, Asteris Masouras:
Mpitoraka bilaogy sy mpilaza vaovao marobe amin'ny Aterineto no nandrakotra ilay famoriana. Isan'ireo tatitra an-tsary malaza nalefa tao ny avy amin'i Anton Motolko avy ao Minsk (@motolko [ru]), euroradio.by [ru].
Toxaby, mpitoraka bilaogy nanaparitaka [ru] lahatsoratra nampiseho ireo sampana manokana ao amin'ny polisy nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanantitrantitra izy fa nandika ny lalàna velona ao Belarosia ny Polisy, ary namadika tamin'ny karazanà fiteny maro ilay lalàna mahakasika izany.
Tao aminà lahatsoratra lava be iray ny mpandrindra ny tolona “Ho an'ny Fahafahana” no nanazava [ru] ny dikan'ilay famoriam-bahoaka am-pahatoniana natao ny 22 Jona: